Otu esi azụ nwa pusi ọnwa abụọ | Nwamba Noti
Otu esi azụ nwa pusi ọnwa abuo
Nwa pusi na nwata bụ anụmanụ rụrụ arụ. Ozugbo ezé ya malitere ịbata, ihe dị ka n’izu nke atọ, ọ ga-amalite ịkpa àgwà n’ụzọ ụmụ mmadụ nwere ike ọ gaghị enwe mmasị nke ukwuu. Ọ ga-achọ inyocha ihe niile ... n'ọnụ ya na mbọ ya. N’oge a ọ naghị eme nnukwu mmebi, mana o nwere ike ime ọtụtụ oge n’ụbọchị nke ihe karịrị otu oge anyị na-eche ma ọ ga-adịkwa otu ahụ ọzọ otu okenye.
Ma anyị nwere azịza nye ajụjụ ahụ n’onwe anyị. Ee Ee. Dabere n’ihe anyị na-akụziri ya - n’amaghị ama ma ọ bụ n’amaghị ama - obere ga-akpa agwa n’otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Maka echi ịkpa àgwà ọma, ọ dị mkpa ịmata otu esi azụ nwa pusi ọnwa abụọ. Ka anyị hụ ihe anyị ga - eme iji gbanwee "obere anụ ọjọọ" ahụ na mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
1 Kedu ihe m kwesịrị ịzụ nwa pusi dị ọnwa abụọ?
1.1 Olee otú ịkụziri ya?
2 Otu esi akuzi nwa nwamba onwa abuo na okenye
2.1 Sozị gị na cat soisie ike
2.2 Kpep enye nditiene ndausụn̄
2.3 Kụziere ya iji igbe awụba ihe nke ọma
2.4 Gwuo na pusi gị
2.5 Positive mkwado
Kedu ihe m kwesịrị ịzụ nwa pusi dị ọnwa abụọ?
Ihe ga-akacha dị gị mkpa bụ ndidi. Ukwuu, ọtụtụ ndidi. Nwa pusi na-aga anwale gị ọtụtụ oge n’ụbọchị, kwa ụbọchị. Ọ ga-arịdata n'apata ụkwụ gị, oge ụfọdụ ịrahụ ụra, mana oge ndị ọzọ igwu egwu, ị ga-amarakwa na okwu a 'kpọọ' n'oge a na-agụnye ịkọcha na ịtachasị ihe niile ị hụrụ, gụnyere aka, aka na ụkwụ.
Ma ọ pụghị mmanụ a .ụ. N'ezie, nke a dị oke egwu. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ anataghị ịhụnanya kwa ụbọchị, mgbe ahụ ọ ga-abụ pusi okenye nke ga-eme omume n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ya na ezinụlọ ya na ndị ọbịa ahụ.
Olee otú ịkụziri ya?
Ọ dị ezigbo mkpa iburu n’obi mgbe niile anyị ekwesịghị ịhapụ ya ịkọ ọkọ ma ọ bụ taa anyị. Ọ dịghị (ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ). N'ihi ya, anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị nwere ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ ụdọ dị nso, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-abụ ihe anyị ga-eji na-egwu ya.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ihe atụ ị banyere na sofa, anyị ga-agbada ya; ọ bụrụ na o bilie ọzọ wakpo anyị ọzọ, anyị ga-ewedata ya ọzọ. Ya mere, ruo mgbe obi jụụrụ ya. Na mbụ ọ ga-esiri ya ike ịmụta na ọ nweghị ike ịwakpo anyị, mana site na oge na ndidi anyị ga-enweta ya.
Isi ihe ọzọ anyị na - agaghị echezọ bụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nwa pusi kwesiri iso ezinulo ya karie ogologo oge. Ọ bụrụ na anyị edebe ya n'ime ụlọ ụbọchị niile, yana enweghị mmekọrịta ọ bụla mmadụ, ọ ga-etolite wee bụrụ pusi 'na-emegide ndị mmadụ', na-ezere ndị mmadụ. Anumanu a aghaghi ichota, umuaka na ndi okenye kwesiri ile anya ya, ya na ha na anumanu ndi ozo bi n'ulo ha ghari inwe obi uto,
Naanị mgbe ahụ ka ọ ga-amụta ibi na anyị. Na, n'abalị, ị ga-ezu ike dị mfe.
Otu esi akuzi nwa nwamba onwa abuo na okenye
Ọ bụ ezie na, mgbe pusi gafere ọnwa abụọ, ị ga-aga n'ihu na-akụziri ya, n'ihi na naanị n'ụzọ ahụ ka ọ ga-abụ pusi okenye dị njikere ịkpa ezi agwa ma nye gị ịhụnanya oge niile na-ebibi ihe ọ bụla n'ụlọ. Mgbe ahụ anyị ga-enye gị ụfọdụ ihe ngosi ka i wee kuziere nwamba gị inwe ezigbo agwa ebe ọ bụ na ọ dị obere.
Sozị gị na cat soisie ike
Ka nwamba gị jiri mara gị ọ dị mkpa ka gị na ya nwee mmekọrịta site na mmalite. Dị ka ndị mmadụ, nwamba na-amụta ọtụtụ ihe site na ikiri omume ndị gbara ha gburugburu. Ka nwamba gị nwee ike ịzụlite omume ọma, ị ga-amalite ịmekọrịta ha site na nwata, site na izu abụọ!
Ọ dị mma ka ị makụọ nwa gị, na ị ga-anọnyere gị obere oge, dị ka nkeji 10. Ọ dịkwa mma ịme ka ndị mmadụ mata onwe gị iji mee ka ha na mmekọrịta mmadụ na ibe ha mara ha. Omume igwu egwu na pusi gi ga-enyekwa ya ohere itinye aka n'omume ojoo ma obu oke oke.
Will ga-enwerịrị ịrara onwe gị nye ma nwee oke ndidi. Cheta na agaghị ata ya ahụhụ ma mesoo ya ihe ọjọọ. Ọ chọrọ ịhụnanya gị niile ka o wee nwee ọganihu n'akụkụ gị.
Kpep enye nditiene ndausụn̄
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nkịta, nwamba nwekwara ike kuziere ịgbaso ntụzi dị mfe. Inwe pusi nke na-a hea ntị na ntuziaka ga-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma ị ga-enyere ya aka inwe ezigbo anụ ahụ na ọgụgụ isi. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bara ezigbo uru iji bulie nwamba na-erube isi ma na-anabata ya.
Mkpali na nkwado dị mma ga-abụ ihe nzuzo nzuzo gị na nke a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụziri pusi gị ịnọdụ ala ma nọrọ na oche, na-eduzi ma na-akpali pusi gị site na usoro ahụ eji nri dika ihe mkpali. Anotherzọ ọzọ isi kụziere nwamba irube isi bụ iji mkpọtụ na nri ka nwamba gị wee malite ijikọ ụda ahụ na omume ọma na nkwa nke ụgwọ ọrụ.
Kụziere ya iji igbe awụba ihe nke ọma
Nzọụkwụ a bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa, na nke kacha sie ike. Ọ dabara nke ọma, ọ na-agbadata ịnọgidesi ike n'akụkụ gị na agbamume sitere na pusi gị. Were ọnọdụ igbe igbe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka nwamba gị jiri ya mee ihe, ị ga-enyerịrị ha ihe kpatara ya. Họrọ mpaghara dị jụụ ma dịkwa mfe maka nwa gị ga-enweta.
Havekwesiri ijide n'aka na ị ga-enweta ọ bụghị naanị igbe mkpofu, kamakwa ihe ndị dị mkpa dị ka nri, mmiri, na akwa, yana ihe egwuregwu ụmụaka kachasị amasị gị. Site na ihe niile ha chọrọ n'otu ebe, ha ga-amalite iji igbe a na-ekpofu mara ha.
Trickzọ ọzọ dị mma ị ga-eme bụ itinye nwa gị kitti n'ime igbe ya oge ọ bụla ọ na-eteta ma ọ bụ mechaa rie nri. Ọbụna nke ka mkpa bụ ime ya mgbe ị hụrụ ihe ịrịba ama na ọ dị njikere ịga ụlọ mposi. Olee otu esi arụzu ọrụ dị otú ahụ? Bido lekọta pusi gị anya otu ị nwere ike. Nke a ga - enyere aka belata ihe ọghọm ma mee ka ọzụzụ igbe na - agwụ ike.
Gwuo na pusi gị
Ọ dị mkpa ka gị na pusi gị gwuo egwu ka o wee nwee ọganihu na mmepe ya. Anyị apụtaghị naanị na ọ na - eji obere obere pusi eji egwuri egwu egwuri egwu, kama na ọ na - eso gị egwu egwu. Na ihe eji egwuri egwu eji mee ihe kwesiri igwu egwu nakwa na gi nwere ike imekorita. Egwuregwu na-enye pusi gị ohere maka ike, uche na mkpali anụ ahụ ya, ohere iji mejuo mmuta ịchụ nta ya na ohere ị ga - eso gị..
Dị ka ụdị ọzụzụ ndị ọzọ, enwere ụzọ ziri ezi iji kpọọ. Kwesịrị ịmegharị egwuregwu iji gboo mkpa pusi gị ma hụ na egwuregwu ndị ị na-egwu na-aga n'ihu, na-enweghị azụghachi azụ pusi gị. Ọbụla ihe ụmụaka ji egwuri egwu ị họọrọ nwere mmetụta dị ukwuu na njikere nwamba gị igwu egwu. Mgbe ị na-azụrụ ihe eji egwuri egwu, ị ga-ahụrịrịrịrị na ị zụrụ ihe egwuregwu ụmụaka kwesịrị ekwesị maka ụmụ nkịta, ọ bụghị nwamba ndị okenye.
Mgbe emekwuru ezi agwa site na mmesi obi dị mma, nwamba mụta ịkpa agwa n'ụzọ ziri ezi. O nwere ike ịbụ na ị hụla mkpa nkwado dị mma na ọkwa ndị ọzọ nke ndụ gị, n'ihi na ọ bụ otu ihe ahụ na nwamba. Nke a Ọ na - enye nwamba gị ihe mere ị ga - eji na - eme omume n’ụzọ ziri ezi.
Nkwado dị mma na-enyere aka ịkwalite omume dị mma na igbochi omume ọjọọ. Nke a dị oke mkpa icheta mgbe nwamba gị na-eme ihe, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịta ya ahụhụ ... mana ọ bụ nhọrọ dị mma maka ya iji mezie omume ọma.
Ta nwamba gị ahụhụ maka ihe ha mejọrọ abụghị ezigbo echiche ma ọlị ka ọ na-eme ka nchekasị na nchekasị ha dịkwuo elu, ọbụnakwa na-agbagha mmekọrịta dị mma nke ị rụsiri ọrụ ike iji wuo. Ọzọ, nkwenye dị mma na-egosi na a na-amata ma na-akwụghachi omume dị mma ụgwọ, na na ọ na-akwadebe pusi gị maka ihe ịga nke ọma.
Na mmechi, ọ bụ ezie na ịkụziri obere nwamba gị nwere ike iyi ihe dị egwu na mbido, nke nta nke nta ị ga-ahụ ya dị mfe karị ka ị na-amata pusi gị na pusi gị ga-amatakwu gị. Site n’iso ndụmọdụ ndị a, ihe niile ga-adịrị unu abụọ mfe. Nkịta gị ga-adị mma nke ọma ma ị ga-enwe ahụ iru ala maka nzụlite ya. Ga-enwe pusi mara mma nke gị na ya nwere ike ịdị jụụ na onye ga-ege ntị na iwu gị mgbe ọ bụla ọ dị mkpa!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nwamba Noti » Nwamba » Curiosities » Otu esi azụ nwa pusi ọnwa abuo
Ogologo oge ole ka ịgba nwamba jiri were? Na nkedo?
Otu esi enyere cat aka urinate